Maamulka Gobolka Nogob oo Ay Wehelinayeen Hawl-wadeeno Caafimaad ayaa xadhiga ka Jaray Balaadhinta Fiiq-Hospital iyo 2bo Xarun-Caafimaad oo Laga Dhisay Degmooyinka - Cakaara News
Nogob(CN) JIMCE Feb-14-2014
Xukuumada Maanta ka arimisa Deegaanka ayaa 3dii sao ee ugu danbaysay Diirada saartay Heerka waxqabadka Xafiisyada waawayn ee Dhanka Horumarinta kana mid yahay Xafiiska Caafimaadka Heer-deegaan iyadoona ay Xukuumadu u Dejisay Qorshayaala Horumarineed iyo Dhismayaasha Mashaariicaha Adeegyada aas-aasiga u ah Bulshada kuwaasoo leh Qiimayn,Dabagal,Check-List iyo shaxda 4ta Rubuc-shaqo ee Sanad-miisaaniyadeedka. Socdaalkii Dhawaa ee Madaxwaynaha DDSI iyo waftigiisii ku Tageen Gobolka Nogob ayaa ay ka mid ahaayeen Balanqaadkii uu madaxwaynuhu u balanqaaday ka jawaabida codsiyihii shacabka nogob ka mid ahaayeen In Isbitaalka magaalada Fiiq loo balaadhiyo laguna soo kordhiyo Qaybo Cusub sidoo kale Degmooyinka Xamaro iyo Qubbi oo codsaday dhismaha xarun-Caafimaad.
Haddaba Masuuliin ka socotay xafiiska caafimaadka maamulka gobolka ka degmada fiiq ayaa ka qayb galay xaflad si heer sara ah loo soo agaasimay oo ka dhacaday madasha shirarka ee magaalada fiiq taas oo qayb ka ahayd furitaanka dhismayaasha uu xafiiska caafimaadku uu ku daray cusbitaalka gobolka nogob oo ay ku baxday aduun lacageed oo ka badan 19 milyan oo birr. Balaadhinta cusbitaalka Gobolka Nogob ee magaalada Fiiq ayaa waxaa loo dhamaystiray dhamaan qalabkii uu u baahnaa cusbitaalku iyada la keenay shaybaadhka loo yaqaano raajitada iyo compiyuutarka baadhista haweenka iyo ragaba Iyo waliba shaybaadhyo kale oo casri ah. Xafiiska caafimaadka DDSI ayaa sidoo kale gaadhsiiyay cusbitaalka Gobolka Nogob dhakhaatiirta aqoonta dheer u leh dhinaca qaliinka,daawayntaba iyo qaybaha kale ee caafimaadka. cusbitaalkan la hirgaliyay 3 bilood ee ugu danbeeyay balaadhinta cubitaalka gobolka nogobka iyo qalabayntiisuna ay soo afjari doonto baahidii dhinaca caafimaadka ee bulshda gobolku ay ku tagayeen gooba ka baxsan gobolka nogob.kuna adkeeyay inay bulshadu ay uga faaiidaystaan sidii loo baahnaa.isla markaana ay ilaashadaan.
Dhinaca kale Maamulka Gobolka Nogob ayaa waxay xadhiga ka jareen xarumo caafimaad oo ku yaala degmooyinka xamaro iyo qubi islamarkaana gaadhsiiyay qalabkii xarumahaasi iyo Ambulanceyo cusub. Sidoo kale bulshada ku dhaqan gobolka nogob gaar ahaan magaalada fiiq iyo degmooyinka xamaro, qubi iyo tuulada gasaangas oo ka tirsan degmada xamaro ayaa si diiran u soo dhaweeyay dadaalada xawliga ah ee ay xukuumada uu Hogaankeeda hayo Madaxwayne Mudane CMC ay Mudo gaaban uga Jawaabeen Codsiyadoodii. I
Isku soo Wada Duuboo Isbedelada Horumarineed ee 3dan Sano Gudahood ka taabo galay Guud ahaan Deegaanka ayaa ku timid Xukuumada oo majaaha u qabatay sidii Dhamaanba Gobolada iyo Degmooyinka loo Gaadhsiin lahaa Isbedelo la taaban karo Rubac kastana la isku Qiimeeyo Waxa laga Qabtay Qorshihii yaalay Sababta iyo Xalkaba taasooy Xukuumadu ku soo afjartay Dayacaadii iyo xilgudasho la'aantii Qawda Maqashii waxna ha u qaban.